ပြည်မြို့က လူသတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားရသူ ဈာပန မြင်ကွင်းများ - အောင်သက်ခိုင်
Home » ဗေဒင် » ပြည်မြို့က လူသတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားရသူ ဈာပန မြင်ကွင်းများ
ပြည်မြို့က လူသတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားရသူ ဈာပန မြင်ကွင်းများ
ဧပြီလ ၂၃ ရက်ညက ပြည်မြို့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူသတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ရသူ မောင်ဇော်မင်းဦးရဲ့ ဈာပန မြင်ကွင်းတွေပါ
အဆိုပါ လူသတ်မှုကို ကျူးလွန်တယ်လို့ သံသယရှိသူ ၃ ဦးစလုံးကို ယခုအခါ ခလရ (၇၅) တပ်ရင်း အချုပ်ခန်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားပြီး စစ်ခုံရုံးတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ လုပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယမန်နေ့က သေဆုံးသူ အသက် ၂၃ နှစ် ရှိ မောင်ဇော်မင်းဦးရဲ ဈာပနကို လာရောက်ပြီး DNA ထုတ်ယူစဉ် စစ်ခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဒု ဗိုလ်မှူးကြီးနေဝင်းက သက်ဆိုင်သူ မိသားစုဝင်များနှင့် သတင်းထောက်များအား စစ်ခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးမယ်လို့ ပြောသွားခဲ့တာပါ။
တနေ့ည ၉ နာရီလောက်က ပြည်မြို့ ဆင်စု ရပ်ကွက် အနားက ဧရာဝတီ မြစ်သောင်ပြင်ပေါ် (နဝဒေး တံတားအောက်) မှာ ချိန်းတွေ့နေတဲ့ သမီးရည်းစား စုံတွဲကို လူ ၃ ဦးက ပစ္စည်းယူ လူသတ်မှုဖြစ်ခဲ့ရာ မသင်္ကာသူ ၂ ဦးကို ဖမ်းဆီးမိလိုက်ချိန်မှာ တပ်မတော်သားများ ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
အဖမ်းခံရသည့် တပ်သား ရဲကိုဦးနှင့် တပ်သား သန်းထိုက်အောင်တို့ကိုတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ခလရ (၇၅) တပ်ရင်းကို ပြန်လွှဲခဲ့လို့တပ်အချုပ်မှာ ချုပ်နှောင်ထားကြောင်း၊ လွတ်မြောက်သွားတဲ့ တပ်သား သန်းဝင်းအောင်ကိုလည်း တပ်ရင်းကို ပြန်အလာမှာ ဖမ်းဆီးပြီး အချုပ်ချထားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒီအကြောင်း သတင်းအပြည့်အစုံကိုလည်း ဧရာဝတီ မြန်မာပိုင်း စာမျက်နှာမှာ ကောင်းမြတ်မင်း ရေးသား တင်ပြထားတဲ့ ပြည်မြို့ လူသတ်မှု စစ်ခုံရုံး ဖွဲ့စစ်မည် ( http://burma.irrawaddy.org/archives/38337 ) ဆိုတဲ့ သတင်းမှာ တင်ပြထားပါတယ်။
Posted by အောင်သက်ခိုင် at 5:33 PM
နည်းပညာဆိုင်ရာများ မောင်စေတနာ kp-3 နည်းပညာ *ကိုဇော်
Android apk (3)
♥♥♥♥♥♥ ♥♥ အလွမ်းမြို့လေး♥♥ ♥♥♥♥♥♥
Copyright © 2011. အောင်သက်ခိုင် . All Rights Reserved